भक्तिको रहस्य – Word of Truth, Nepal
“अनि हेर, स्वर्गबाट एउटा आवाज आयो, जसले भन्यो: ‘यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, जससँग म अत्यन्तै प्रसन्न छु।'” (मत्ती ३:१७)
पिताले आफ्नो पुत्रलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। ख्रीष्टियन जीवन बुझ्नलाई यो तथ्य बुझ्न अनिवार्य छ। आफ्नो एकमात्र अद्वित्तीय पुत्रलाई पिताले कत्तिको प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई, अर्थात् त्यस प्रेमको चौडाइ र गहिराइलाई, पूरै अनन्तकालमा समेत पूर्ण रूपमा जानेर नसकिने कुरा हो। पुरानो नियमका कतिपय बलिदानहरूले पुत्रको व्यक्तित्व र कार्य पितालाई मीठो बास्ना दिने कुरा थियो भन्ने तथ्यलाई दर्शाउँथे। पुत्रले सधैं पितालाई खुशी पार्ने कुराहरू गर्नुभयो (यूहन्ना ८:२९)। पिताले पुत्रलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि पुत्रलाई कुनै न कुनै रूपमा दर्शाउने जुनसुकै कुरा पनि उहाँको निम्ति अति नै मनपर्दो हुने बताइएको छ। उहाँको पुत्रजस्तै देखिने, पुत्रजस्तै सुनिने, पुत्रजस्तै बोल्ने, पुत्रजस्तै हिँड्ने, यहाँसम्म कि उहाँको पुत्रको जस्तै बास्ना आउनेकुराले समेत पितालाई एकदमै प्रसन्न तुल्याउँदछ।
पिताले हामीभित्र हुनुहुने आफ्नो पुत्रको हरेक अभिव्यक्तिलाई मन पराउनुहुन्छ। अचम्म, अचम्मको कुरा के भने, पिताले वर्तमान युगको विश्वासीलाई आफ्नो पुत्रभित्र राख्‍नुभएको छ र आफ्नो पुत्रलाई चाहिँ हामीभित्र। विश्वासद्वारा हामी ख्रीष्टसित अद्‍भुत रीतिले एउटा यस्तो एकत्व र घनिष्टतामा जोडिएका छौं, सम्भवत: यसलाई हामीले कहिल्यै पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्नेछैनौं। हामी उहाँको शरीरभित्र बप्‍तिस्मा गरिएका छौं। हामी उहाँको मृत्यु, बौरिउठाइ र स्वर्गारोहणमा ख्रीष्टसित जोडिएका छौं… र उहाँसँगै स्वर्गमा बसालिएका छौं। यस अद्‍भुत सत्यताको परिणामहरूको बखान त गरेर साध्य छैन र जति गरे पनि अत्युक्ति हुँदैन। यो त हाम्रो युगको महिमा नै हो।
वास्तवमा, “ख्रीष्ट तिमीहरूभित्र” (कलस्सी १:२७) नै भक्तिपूर्ण ख्रीष्टियन जीवन हो। ख्रीष्टियन जीवन यही हो –हामीभित्र बास गर्नुहुने ख्रीष्टकै जीवन हाम्रो मरणशील शरीरद्वारा देखिनु। फिलिप्पी १:२१ मा पावलले लेखे, “मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हो।” फेरि कलस्सी ३:४ मा उनले लेखे, “ख्रीष्ट जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ।” उहाँ, जससँग पिता प्रसन्न हुनुहुन्छ, हामीभित्र नै हुनुहुन्छ र उहाँ नै हाम्रो नयाँ जीवन हुनुहुन्छ! यो सत्यतालाई विश्वासैद्वारा ग्रहणगरिनुपर्छ। विश्वास भन्नाले परमेश्वरले लिखितम दिनुभएको आफ्नो वचनको प्रकाशलाई साँचो मानिलिनु। अन्य उपायले यो उदेकको सत्यतालाई जान्न सकिन्न। यस्तो प्रबन्ध कसैको चित्तमा पनि आउन सक्ने कुरो थिएन। तर यही सत्यतालाई परमेश्वरले आफ्नो वचनमा प्रकट गर्नुभएको छ।
ख्रीष्टियन जीवनको लक्ष्य ख्रीष्ट हामीमा बनिनु हो। रोमी ८:२९ अनुसार “किनभने जसलाई उहाँले पहिले नै जान्नुभएको थियो, उनीहरूचाहिँ आफ्नै पुत्रको रूपमा ढालिऊन् भनेर उहाँले उनीहरूलाई पहिले नै ठहराउनु पनि भयो।” संसारको उत्पत्तिभन्दा अघिदेखि नै परमेश्वरको यही योजना थियो। उक्त योजना प्रत्येक साँचो विश्वासीको जीवनमा पूरा हुने नै छ किनकि “जसले तिमीहरूमा एउटा असल काम शुरू गर्नुभएको छ, उहाँले येशू ख्रीष्टको दिनसम्म त्यो पूरा गर्नुहुनेछ” (फिलिप्पी १:६)। गलाती ४:१९ मा प्रेरित पावलद्वारा लिखित वचनलाई ध्यान दिऔं: “हे मेरा साना नानीहरूहो, जबसम्म ख्रीष्ट तिमीहरूमा बनिनुहुन्न, तबसम्म म फेरि तिमीहरूका निम्ति प्रसूति-वेदनामा हुन्छु।” “बनिनु” भनेर अनुदित शब्द (मोर्फोओ, μορφοω) ले भित्री वास्ताविकतालाई बाहिरपट्टि अभिव्यक्त गर्ने कार्यलाई जनाउँछ भनेर ग्रीक भाषाविद श्री केनेथ वीस्ट (Kenneth Wuest) ले टिप्पणी गर्नुभएको छ। हामीभित्रभएको ख्रीष्टको जीवन बाहिर प्रकट गरिनुपर्छ। निम्न खण्डहरूलाई विचार गर्नुहोस्:
२ कोरिन्थी ४:१०-११ — “येशूको जीवन पनि हाम्रो शरीरमा प्रकट होओस्… येशूको जीवनपनि हाम्रो मरिजाने शरीरमा प्रकट होओस्।”
रोमी १३:१४ — “तर येशू ख्रीष्टलाई पहिर; अनि कुकामनाहरू पूरा गर्नालाई शरीरका लागि कुनै प्रबन्ध नगर।”
२ कोरिन्थी २:१४ — “अब परमेश्वरलाई धन्यवाद होओस्, जसले ख्रीष्टमा हामीलाई सधैं विजयी बनाउनुहुन्छ, र हरेक ठाउँमा हामीद्वारा आफ्नो ज्ञानको मीठो बास्ना प्रकट गर्नुहुन्छ।”
१ कोरिन्थी २:१६ — “हामीसँग ख्रीष्टको मन छ।”
फिलिप्पी २:५ — “ख्रीष्ट येशूमा जुन मन थियो, त्यही मन तिमीहरूमा पनि होओस्।”
पिताले पाप स्वभावको हरेक अभिव्यक्तिलाई घृणा गर्नुहुन्छ। ख्रीष्टियन जीवन बुझ्नलाई यो तथ्य पनि बुझ्न अनिवार्य छ। परमेश्वरले पाप स्वभावलाई घृणा गर्नुहुन्छ। पुत्रलाई पिताले गर्नुहुने प्रेमको गहिराइलाई जसरी हामी पूरै जान्न सक्दैनौं, त्यसरी नै पाप स्वभावलाई पिताले गर्नुहुने घृणाको गहिराइ पनि हामी पूरै जान्न सक्दैनौं। पाप स्वभावलाई हामीले गर्ने घृणा त्यसलाई पिताले गर्ने घृणाभन्दा अतुलनीय रूपमा घटी हुन्छ। परमेश्वरले पाप स्वभावको हरेक अभिव्यक्तिलाई घृणा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले पाप स्वभावको रूपलाई घृणा गर्नुहुन्छ; उहाँले पाप स्वभावको स्वरलाई घृणा गर्नुहुन्छ; उहाँले पाप स्वभावको गन्धलाई घृणा गर्नुहुन्छ। उहाँले पाप स्वभावको सोच्ने तरिकालाई घृणा गर्नुहुन्छ। उहाँले पाप स्वभावको तर्कलाई घृणा गर्नुहुन्छ। उहाँले पाप स्वभावको कार्यशैलीलाई घृणा गर्नुहुन्छ, त्यसको चल्ने तरिका, त्यसको हिँड्नेतरिकालाई घृणा गर्नुहुन्छ। उहाँले त्यसको स्वार्थी स्वभावलाई घृणा गर्नुहुन्छ। उहाँले त्यसको धूर्त्याइँ र छललाई घृणा गर्नुहुन्छ। तर उहाँले आफूलाई आत्मिक वा भक्त देखाउन खोज्ने पाप स्वभावको अभिव्यक्तिलाई विशेष गरी घृणा गर्नुहुन्छ। भक्तिको बाह्यावरण पहिरेको पाप स्वभावलाई उहाँ घृणा गर्नुहुन्छ। भ्रष्ट पाप स्वभावले आफूलाई भक्तिको भेषमा प्रस्तुत गर्न मन पराउँछ, तर त्यसको साँचो शक्तिलाई, अर्थात् पवित्र आत्माको शक्तिलाई, इन्कार गर्दछ र आत्माको सट्टा शरीरलाई स्थानापन्न गराउँदछ। सड्दै गरेको लाशको दुर्गन्ध भन्दा बढी वाकवाक लाग्ने र घीनलाग्दो अर्को कुरा प्रकृतिमा नपाइनुको कारण त्यहाँ हुनुपर्दछ। के यसमा परमेश्वरबाटको कुनै पाठ नहोला? परमेश्वरको सामु कुनै बाह्यावरणले कुहिएको शरीरको दुर्गन्धलाई ढाकछोप गर्न सक्दैन। भ्रष्टपूर्ण शरीरले काढ्ने गन्ध यति उग्लेको हुन्छ कि यसलाई ढाकछोप गर्नै सकिन्न। त्यो हटाइनुपर्दछ – परमेश्वरको तरिकाले।
उत्पत्ति ६:१२ — “सबै” मानिसहरू “भ्रष्ट” भएका थिए र पूरै नाश गरिन योग्य भएका थिए। विश्वास गर्न हामीलाई गाह्रो लाग्ला, तर यो साँचो थियो।
रोमी ३:१०-१२ — “असल गर्ने कोही छैन, एउटै पनि छैन।”
रोमी ७:१८ — “मेरो शरीरभित्र कुनै असल कुराले वास गर्दैन।”
रोमी ७:५ — शरीरले “मृत्युका निम्ति फल” फलाउँदछ।
रोमी ८:७ — “किनभने शरीरमा मन लगाउनुचाहिँ परमेश्वरसँग दुस्मनी गर्नु हो।”
गलाती ५:१७ — “शरीरले आत्माको विरोधमा अभिलाषा गर्दछ” – सधैं “यिनीहरू एक-अर्काको विरोधमा छन्।“
हाम्रो पाप स्वभावलाई परमेश्वरले कतिसम्म घृणा गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न हामीलाई गाह्रैपर्छ। त्यसबेला हामी आफ्नो अविश्वास प्रकट गरिरहेका हुन्छौं जुनबेला हामी त्यस पाप स्वभावलाई त्यो “त्यति नराम्रो छैन” जस्तै देखाउनलाई उपायहरू खोज्छौं, त्यसलाई “सुटेड-बुटेड” पार्छौं, बेसी दुर्गन्ध नआओस् भनी त्यसलाई ढाकछोप गर्छौं। तर परमेश्वरलाई कहिल्यै छल्न सकिन्न। कडा मुक्काले किचिक्कै पारिएझैं हामीलाई अनुभूति तब हुन्छ जब “मेरोशरीरभित्र कुनै असल कुराले वास गर्दैन,” र मेरो शरीर पितालाई घीनलाग्दो छ भनेर अन्तमा महसुस गर्न पुग्दछौं।
परमेश्वरको वचनले हामीलाई पतित, भ्रष्ट, मानवीय स्वभावप्रतिको परमेश्वरको घृणाको गहिराइको बारेमा प्रशस्तै चेताउनी नदिएको होइन। तर त्यसअनुसार सोच्नु हाम्रो निम्ति अस्वभाविक कुरा हो। यस विषयमा हाम्रो विचार परमेश्वरको विचारसित सहमतिमा साँच्चै आउनलाई समय लाग्छ, प्रायः वर्षौंको समय। स्वभावैले, एउटा विश्वासीले यस शरीरमा केही न केही गडबड छ भनेर उसले तुरन्तै चाल पाउँदछ, तरैपनि परमेश्वरले जस्तै त्यो पूरै रद्दी छ भनेर त्यसको विरुद्ध फैसला गर्न उसलाई गाह्रै पर्छ। हाम्रो शरीरमा कुनै असल कुरा छैन भन्ने परमेश्वरको निष्कर्षमा ईश्वरीय प्रकाश बेगर हामी कहिल्यै पुग्न सक्ने थिएनौं। हामी सबैमा त्यस्तो एउटा प्रवृत्ति छ जसअनुसार हामी यस शरीरको कुनै अंशलाई जोगाउन खोज्छौं, अर्कै रूपमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्न खोज्छौं, “सुटेड-बुटेड” पार्न खोज्छौं र त्यसलाई परमेश्वरकहाँ अर्पण गर्न खोज्छौं। परमेश्वरले आफ्नो वचनमा भन्नुभएको कुरा सुनेर हामीलाई ताजुप लाग्छ; उहाँको वचन हाम्रो स्वभाविक विचारधाराको विपरित दिशामा दौडिरहेको छ। हाम्रो मन परमेश्वरको वचनको जलले प्रशस्त गरी भिजिइएको छैन भने, यस शरीरसम्बन्धी परमेश्वरको मुल्याङ्कनले भिजिएको छैन भने, हाम्रो हेराइ भ्रमपूर्ण हुन्छ, हामी आफूलाई नापभन्दा ठूलो देख्छौं।
यिनै कुराले यस युगको विश्वासी जनलाई एउटा गम्भीर दुविधामा पारेको हुन्छ। हामीभित्र ख्रीष्टको बास त छ जसलाई पिताले प्रेम गर्नुहुन्छ। तर हामीभित्र शरीरको बास पनि छ, अर्थात् आदमबाट सरी आएको त्यो पतित पाप-स्वभाव जसलाई पिताले घृणा गर्नुहुन्छ। कुनै पनि घडीमा यी दुइटामा एउटाचाहिँ हाम्रा मरणशील शरीरहरूद्वारा प्रकट भइरहेका हुन्छन्। जतिसुकै राम्रो लक्ष्य राखे तापनि परमेश्वरको वचनमा प्रकट गरिएअनुसारको पाप स्वभावको सामना गर्ने परमेश्वरको उपायको बारेमा यदि हामी अनजान छौं भने, हाम्रो प्रयास विफल हुनेछ। पाप स्वभावको समस्या समाधान सम्बन्धी रहेको उहाँको आफ्नो विस्तृत योजनालाई परमेश्वरले आफ्नो वचनमा प्रकट गर्नुभएको छ। नयाँ जन्मद्वारा पाइएको नयाँ स्वभावको कारण असलको “इच्छा गर्नेचाहिँ” आफूसित “हाजिर” (रोमी ७:१८) भएर पनि “जे असल छ, त्यसलाई पूरा गर्नेचाहिँ” (रोमी ७:१८) कसरी हो सो जान्नु नै पर्छ नत्रता हामीले विजयको अनुभव गर्नेछैनौं।
नयाँ नियमका पत्रहरूको मूलधारा (major theme) हरू मध्येमा यस रहस्य सम्बन्धीका सत्यताहरूको सँगालो एउटा मुख्य विषयवस्तुको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, अर्थात् ख्रीष्ट र ख्रीष्टको शरीरसँग सम्बन्धित सत्यताहरू — जुन सत्यताहरू बितेका युगहरू र पुस्ताहरूमा रहस्यमा (गोप्य) राखिएका थिए, तर अहिले मानिसका सन्तानहरूलाई प्रकट गरिएका छन्। १ तिमोथी ३:१६ मा पावलले ख्रीष्ट हामीभित्र हुनुहुन्छ भन्ने रहस्यको सत्यता र भक्ति (पद १६) तथा चालचलन (पद १५) सितको यस सत्यताको सम्बन्धको चर्चा गर्छन्। मानव शरीरमा आफ्नो पुत्रलाई प्रकट गर्नु नै परमेश्वरको योजना रहेछ। उक्त योजना एक त उहाँको देहधारण (incarnation) मा येशू ख्रीष्टमा पूरा भयो; र यस कुरालाई ख्रीष्टको शरीर अर्थात् मण्डलीमा पूरा गर्ने परमेश्वरको योजना छ; र साथै यस कुरालाई ख्रीष्टको शरीरका प्रत्येक अङ्गहरूमा पनि पूरा गर्ने परमेश्वरको योजना छ। ख्रीष्टको शरीरको अस्तित्व र यसको बनोट (यहूदी र अन्यजातिबीच समानता हुने कुरा) समेत रहस्यमा (गोप्य) रहेको थियो। यसको जन्म रहस्य थियो; र्‍याप्चरद्वारा हुने यसको प्रस्थान रहस्य थियो। ख्रीष्टसितको यस किसिमको नयाँ सम्बन्ध रहस्य थियो जसरी उहाँले पछि प्रकट गरिदिनुभयो: “तिमीहरू ममा र म तिमीहरूमा।” आज भक्तिको जीवनको आधार नै यस रहस्य हो, अर्थात् ख्रीष्टको शरीरका एक-एक अङ्गहरूद्वारा मानव शरीरमा भित्र बास गर्नुहुने ख्रीष्टको जीवन प्रकट गरिनु।
“उनीहरूकहाँ परमेश्वरले, अन्यजातिहरूको बीचमा यो रहस्यको महिमाको धन के हो, सो प्रकट गर्न चाहनुभयो: ‘महिमाको आशा ख्रीष्ट तिमीहरूभित्र’ नै रहस्य हो” (कलस्सी १:२७)।
यस युगमा भक्तिको जीवनको आकृति आमूल रूपमा परिवर्तित भएको छ भन्ने कुरा ख्रीष्ट हामीभित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने तथ्यले देखाउँछ। यो त जीवन जिउने पूर्णतयानयाँ नियम हो, जसलाई पुरानो नियमका पवित्र जनहरूले कहिल्यै कल्पना समेत गरेका थिएनन्। जीवन जिउने यो नियम व्यवस्था अन्तर्गतको जोकोहीको जस्तोसुकै अनुभवभन्दा पनि अत्यन्तै उत्कृष्ट छ। उहाँचाहिँ भित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने तथ्यले भाँडो भित्रबाट शुरु भएर बाहिरसम्म शुद्ध पारिँदै छ भन्ने कुरा देखाउँछ। धर्मले चाहिँ भाँडोलाई बाहिरबाट शुरु गरेर भित्र शुद्ध पार्ने प्रयास गर्दछ… तर धर्मले भित्रपट्टिलाई सफा पार्न सक्दैन, त्यसैले बाहिरपट्टिलाई सफा राख्‍नमा नै त्यो सन्तुष्ट रहन पुग्छ। त्यो त भक्तिको केवल बाह्य भेष मात्र हो… चुना पोतेको बराबर…जुनचाहिँ भित्रसम्म कहिल्यै पुग्दैन। पाप स्वभावलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास हो यो। धर्मले भाँडोको भित्रपट्टिलाई फोहोर नै राख्दछ…दोषी नै राख्दछ। यसले कबरको बाहिरपट्टिलाई सफा गर्दछ र सिँगार्दछ, तर भित्रपट्टि भने त्यो मृतकका हड्डीले भरिएको हुन्छ। त्यो आत्मिकरूपमा मरेको हुन्छ। ख्रीष्टियन जीवन बिलकुलै भिन्न कुरा हो। यसको शुरुआतमै अर्थात् साँचो विश्वासको घडीमै ख्रीष्ट हामीभित्र बास गर्न आउनुहुन्छ। अनि भित्र बास गर्ने उक्त जीवनचाहिँ विश्वासीको क्रमानुसार परिवर्तनको जमानतहो जुन परिवर्तन भित्रपट्टिबाट शुरु भएर बाहिरसम्म प्रकट हुन्छ। ख्रीष्ट हामीहरूमा बनिँदैहुनुहुन्छ…विस्तारै, मन्द गतीमा, प्रायः चालै नपाई, तर निश्चय नै।
ख्रीष्टको रहस्य नै ख्रीष्टियन जीवन (व्यवहार) को आधारशिला हो। भक्तिको रहस्यचाहिँ भक्तिपूर्वक जिउने बिलकुलै नयाँ व्यवस्थापन हो, र यस प्रबन्धको विशेषता नै हो। “ख्रीष्ट तिमीहरूभित्र” हुनु नै भक्तिमय ख्रीष्टियन जीवन हो, अर्थात् विश्वासीभित्र बास गर्नुहुने ख्रीष्ट नै भक्तिमय ख्रीष्टियन जीवन हो। योभन्दा कम वा योभन्दा अन्य कुरा नकली हो… शरीरको धोकापूर्ण काम हो… जसलाई पिताले घृणा गर्नुहुन्छ।
त्यसैले, एक अर्थमा, यस युगका विश्वासीहरूलाई परमेश्वरको वचनचाहिँ यस रहस्यको प्रकाश हो – सबै यसका हाँगाबिँगासहित… परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई हामीमा कसरी प्रकट गर्ने योजना गर्नुभयो भन्ने कुरा समेत। इसाई समूहहरूमा जुन नापमा यस सत्यतालाई बेवास्ता गरिन्छ वा हलका ठानिन्छ, त्यतिकै नापमा भक्तिको जीवन पनि दुर्गम बन्छ। यस रहस्य २००० वर्षअघि प्रकट गरिएको थियो, तरैपनि कतिपय समूहहरूमा यस सत्यतालाई कुनै “नयाँ” कुरा भनी एकातिर पन्छाइने गरिन्छ। पवित्रीकरणको ईश्वरीय तरिका कुनै नयाँ उपकल्पना होइन। अहँ, ब्रेदरेनहरू (Plymouth Brethren) यसका रचनाकार होइनन्…न ता केजिक (Keswick Convention) काहरू… न ता डालस (Dallas Theological Seminary) वा मूडी (Moody Bible Institute) वा गहन जीवन कन्फरेन्स (deeper life conference) का ईश्वर-शास्त्रीहरू। ती कुनैबाट आएको होइन यो। यो त त्यस महिमापूर्ण रहस्यकै एउटा पाटा थियो, जुनचाहिँ परमेश्वरको विचार र हृदयमा लुकेर बसेको थियो, पवित्र आत्माद्वारा खोजिएको थियो, र नयाँ नियमका पवित्र प्रेरित तथा भविष्यवक्ताहरूकहाँ प्रकट गरियो, र पत्रहरूमा अभिलेख गरियो, र आत्माले भरिएका विश्वासीहरूको विचार तथा हृदयहरूमा पवित्र आत्माद्वारा प्रकाशित गरिन्छ… तिनीहरूकहाँ प्रकाशित गरिन्छ, जो उहाँको इच्छा पालन गर्न चाहन्छन्। यो त सीधै बाइबलबाटकै हो। यसलाई बुझ्न र प्रयोगमा ल्याउन वचनमा धेरै मेहनत गर्न आवश्यक पर्छ… र यो मणीहरूभन्दा बढी मूल्यको छ। यस रहस्यको महिमाको धनलाई नै यदि हामी हलका ठान्छौं भने परमेश्वरले हामीमाथि दया गरून्!
भक्तिपूर्वक कसरी जिउने भन्ने बारेमा परमेश्वरको वचनका शिक्षाहरूमा क्रूस नै केन्द्रीय कुरा रहेको पाइन्छ। पावलले १ कोरिन्थी १:१८ मा (“कुरा” = वचन; लोगोस, λογος) उल्लेख गरेजस्तै, ख्रीष्टियन सन्देशलाई संक्षेपमा “क्रूसको वचन” भन्न सकिन्छ। क्रूस नै केन्द्रीय कुरा हो। हाम्रो पाप स्वभावप्रति परमेश्वरको धारणा कस्तो छ, क्रूसले बताउँछ। पाप स्वभाव परमेश्वरलाई घीनलाग्दो हुन्छ, र क्रूसको वचन मानव पाप‍ स्वभावलाई घीनलाग्दो हुन्छ… किनकि पाप स्वभावको निम्ति क्रूसको सन्देश भनेको मृत्यु हो।
आफ्नो मृत्यु र बौरिउठाइको घोषणा गर्नुहुँदा स्वयम् येशू ख्रीष्टको मुखबाट निस्केको क्रूसको वचनप्रति पत्रुसको प्रतिक्रिया कस्तो थियो, विचार गर्नुहोस् त (मत्ती १६:२१-२३)। पत्रुसले प्रभुलाई हप्काए। (कल्पना गर्नुहोस् त!) “यस्तो नहोस्, प्रभु! तपाईंमाथि यो कुरा कुनै रीतिले परिआउनेछैन!” यो क्रूसलाई – मुक्ति र पवित्रीकरणको परमेश्वरको सन्देशलाई – यस विषयमा परमेश्वरको प्रकाशलाई शारीरिक, पार्थिव, मानवीय विचार पद्धतिद्वारा अस्वीकार गरियो… पत्रुस जस्तो मान्छेद्वारा समेत। (शारीरिक विचारधाराले क्रूसलाई पन्छाउनै खोज्छ।) पत्रुसले परमेश्वरका कुराहरूलाई होइन तर मानिसहरूका कुराहरूलाई ध्यान दिँदै छन् भनी येशूले टिप्पणी गर्नुभयो। पत्रुस मानिसहरूले जस्तै विचार गर्दैथे – पतित, भ्रष्ट पाप स्वभावको प्रभुत्वमुनि रहेका पार्थिव मानिसहरूले जस्तै… जुनचाहिँ परमेश्वरलाई गन्हाउँछ।
तर हेर्नुहोस् त कसरी पत्रुसको शारीरिक विचारलाई भक्ति र प्रेमको भेषले ढाकछोप गरिएको थियो। “प्रभु, तपाईंप्रति मेरो प्रेम अति गहिरो भएकोले… म तपाईंको अति वफादार भक्त भएकोले, तपाईंमाथि यो कुरा म कुनै रीतिले परिआउन दिनेछैन!” मानवीय मनोभाव र जोशलाई प्रायशः भक्ति भनी ठानिन्छ, तर प्रभु येशूलाई झुक्क्याउन सकिन्न। उहाँले कुहिएको पाप स्वभावले दुर्गन्ध काढेको थाह पाउन सक्नुहुन्थ्यो। पत्रुसको प्रेम र भक्तिको सतहमुनि रहेको खास जरो देख्‍न सक्नुहुन्थ्यो उहाँ। उहाँले भन्नुभयो, “हे शैतान, मेरो पछिल्तिर जा!” शैतानले विश्वासीहरूलाई मानवीय सोचाइतर्फ… प्रेम र भक्तिको भेषलाई पहिरँदै भ्रष्ट पाप स्वभावको जराबाट उम्रेको विचारधारा र मनोभावहरू प्रकट गर्ने दिशातर्फ मोडिन प्रभावित पार्दछ। हेर्नुहोस् त, कसरी यसले वर्तमान इसाईजगत (Christendom) ले पहिरेको भक्तिको बाहिरी भेषको बयान गर्दछ। बाहिरी आवरण जतिसुकै प्रभावकारी देखिए तापनि, उद्‍गार र मनोभावहरू प्रेम र भक्तिले जतिसुकै ओतप्रोत भएको सुनिए तापनि, प्रभुले सतहमुनिको शारीरिक मानवीय विचारधाराको गन्ध थाह पाउन सक्नुहुन्छ।
यहाँ छ एउटा अचम्मको कुरा। पतित मानवीय पाप स्वभाव परमेश्वरलाई यति घृणित र वाक्कलाग्दो भएर पनि त्यसले एउटा मानिसमा कुनै न कुनै किसिमले आफूलाई परमेश्वरप्रतिको प्रेम, भक्ति र समर्पणता जस्तोको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ… पत्रुस जस्ता व्यक्तिहरूमा समेत यो हुन सक्छ, जोहरूले त जान्नुपर्नेथ्यो भन्ने हामीलाई लाग्ला। अनि पाप स्वभावको गन्ध परमेश्वरलाई यति साह्रै वाक्कलाग्दो भएर पनि… त्यसलाई परमेश्वरकहाँ चढाउनेहरूलाई भने कुनै दुर्गन्धको आभास नहुँदो रहेछ। यसको कारण त पाप स्वभावको हृदय सबैभन्दा छली र त्यसलाई निको नहुने रोग लागेकोले हो। त्यसलाई कसले जान्न सक्छ र? पाप स्वभावप्रति परमेश्वरको धारणा कस्तो छ, वचनले हामीलाई बताउँछ। साथै पाप स्वभाव कति धूर्त, छली र चलाख छ, त्यो पनि वचनले बताउँछ। यसो हुनाले हामी विश्वासीहरू एउटा कुरामा सावधान हुन आवश्यक छ, हाम्रो सोचाइमा अन्य कुरालाई भन्दा एउटा कुरालाई सधैं अग्रस्थानमा राख्‍न जरुरी छ: हाम्रो हिँडाइ रसेवाको श्रोत के हो? थाह भएकै कुरा हो, हाम्रै जीवनकालभित्र इसाईजगतमा “इसाई राज्यहरू” (evangelical empires) निर्माण भएका छन्… परमेश्वरकै महान् कार्यहरू भनी ठानिएका राज्यहरू… परमेश्वरका समर्पित जनहरूद्वारा निर्मित… प्रभावशाली… महत्त्वपूर्ण… सफल… तर पछि पत्ता लाग्दा भने सबै नै शरीरद्वारा निर्मित: काठ, घाँस र पराल। सेवाकार्यमाजस्तै व्यक्ति-व्यक्तिका जीवनहरूमा पनि यस्तै हुन सक्छ। ख्रीष्टको न्यायआसनले प्रकट गर्नेछ हाम्रो काम कस्तो किसिमको रहेछ… कति धेरै वा कति प्रभावशाली वा कति ठूलो रहेछ भन्ने होइन, तर कस्तो किसिमको। इभान्जेलिकल र क्यारिज्म्याटिक समूहहरूमा जस्तै आधारभूतवादी (fundamental) समूहहरूमा पनि यस्तै हुन सक्छ। हाम्रै नजिककाहरूमा पनि शरीरअनुसारको… मानवीय महत्त्वाकाङ्क्षामा… शारीरिक विचारधारामा… राजनैतिक… र व्यापारिक कार्यशैयलीको अभ्यास भइरहेको हुन सक्छ… विश्वासको सार (doctrinal statement) जतिसुकै ठोसरूपमा आधारभूतवादी भए तापनि… अथवा बाहिरी भेष जतिसुकै आधारभूतवादी देखिए तापनि त्यसले फरक पार्ने होइन… परमेश्वरले पाप स्वभावको दुर्गन्ध चाल पाउनुहुन्छ त्यो जहाँसुकै होस्। अनि उहाँले त्यसलाई अन्य समूहहरूमा जत्तिकै आधारभूतवादी समूहहरूमा पनि त्यत्तिकै घृणा गर्नुहुन्छ।
पाप स्वभावसित व्यवहार गर्ने परमेश्वरको एउटै तरिका छ: त्यो हो क्रूस। पाप स्वभावसित व्यवहार गर्ने मानिसको शारीरिक, पार्थिव, प्राकृतिक तरिका हो त्यसलाई सुधार गर्नु, सुटेड बुटेड पार्नु, हेर्दा राम्रो देखाउनु, नवीकरण गर्नु, त्यसमा जोश भर्नु, त्यसलाई विकसित रूप दिनु, संस्कृति, मर्यादापूर्ण ढाँचा र धर्मले ढाक्नु… अनि त्यसलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्नु। आउनुहोस्, यसलाई हामी स्वीकार गरौं: यस किसिमको सोचाइ हामी सबैभित्र हुन्छ नै। हाम्रो शरीरभित्र कुनै असल कुराले बास गर्दैन भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्न हामीलाई कति गाह्रो छ। पक्कै पनि हामीमा जोगाउन लायक, सुधार्न सकिने केही न केही हुनुपर्छ भनेर हामी ठान्न चाहन्छौं। तरैपनि रोमी ८:३ ले बताएअनुसार परमेश्वरले पाप स्वभावलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहुन्न। उहाँले त्यसलाई मृत्यु दण्डको लायक भनी दोषी ठहराउनुभयो। गलाती ५:२४ ले बताउँछ, विश्वासीको सवालमा शरीर, त्यसका कामना र अभिलाषाहरूसहित, क्रूसमा टाँगिसकियो। त्यसको हामीमाथिको शक्ति र अधिकारबाट हामी अलग पारिएका छौं जसको फलस्वरूप हामी अब त्यसको अधिकारमुनि आफूलाई सुम्पिनुपर्दैन। शरीर (त्यसको मानवीय विचार, सफलताहरू, धारणाहरू, उर्जा, प्रयत्‍नहरू, लक्ष्यहरू, महत्त्वकांक्षाहरू, पार्थिव मान्यताहरू; आदम र यस पार्थिव संसारसित जोड्ने हाम्रो पतन, शारीरिक मानव स्वभावका सबै कुराहरू) को सवालमा परमेश्वरको उपाय हो, क्रूस। यो योजना मानिसको हृदयबाट कहिले पनि उब्जने सक्ने योजना थिएन तर उहाँको वचनमा परमेश्वरको आत्माद्वारा प्रकट गरिएको योजान यही हो। त्यहाँ क्रूसमाथि परमेश्वरले हाम्रो पुरानो मानिससित व्यवहार गर्नुभयो (रोमी ६:६)। त्यहाँ क्रूसमाथि परमेश्वरले हाम्रो पाप स्वभावसित व्यवहार गर्नुभयो (रोमी ८:३)। त्यहाँ क्रूसमाथि परमेश्वरले हाम्रा एक-एक पापहरूसित व्यवहार गर्नुभयो (१ कोरिन्थी १५:३)। जताबाट हेर्नुहोस्, शरीरको सवालमा परमेश्वरको उपाय क्रूस नै हो। हाम्रो पतित मानव स्वभाव, पाप र पापहरू, दुवै जरा र फल, क्रूसमा ठोकिनुपर्‍यो। हामी क्रूसमा गर्वगर्दछौं।
पवित्र जनहरूलाई प्रचार गरिँदा हाम्रा प्रवचनमा जुन नापमा क्रूसलाई न्यूनीकरणगरिन्छ त्यही नापमा विश्वासीहरू आफ्नो पाप-स्वभावसित सङ्घर्ष गर्नलाई उनीहरूकै शक्तिको भरमा छोडिन्छन्…आफ्नो पाप-स्वभावलाई क्रूसमा टाँग्ने प्रयासमा…त्यसलाई क्रूसमा टाँगिसकिकियो भनी विश्वास गर्नुको सट्टा। हराएकाहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिँदा क्रूसको न्यूनीकरण गरियो भने मुक्तिको प्रबन्धलाई हेरफेर गर्न पुगिन्छ। पवित्र जनहरूलाई वचनको शिक्षा दिइँदा क्रूसको न्यूनीकरण गरियो भने पवित्रीकरणको प्रबन्धलाई हेरफेर गर्न पुगिन्छ। परमेश्वरको वचनको सन्देश नै क्रूसको वचन हो…सारा वचन नै ख्रीष्ट, उहाँको क्रूसको मृत्यु, उहाँसित क्रूसमा भएको हाम्रो मृत्युमा केन्द्रित छ। यसकारण, यो हामीलाई मन नपर्ला, तर पाप स्वभावको सामना गर्ने परमेश्वरको एउटै उपाय छ, त्यो हो: क्रूस। पाप स्वभावको दुर्गन्धको समाधान गरिनैपर्छ — अहमलाई हटाइनैपर्छ र त्यसलाई क्रूसमै छाडिनुपर्छ अनि तब मात्र त्यसको सट्टामा हामीभित्र बास गर्नुहुने ख्रीष्टको मीठो बासना प्रकट हुन सक्छ।
इसाई जगतमा हुने शिक्षण तथा प्रवचनका सेवाकार्यहरूमा कुन कुरालाई जोड दिइनुपर्छ भन्ने सवालमा त्यहाँ उलटपुलट गराउन हाम्रो विरोधी शैतान व्यस्त रहेको पाइनु कुनै अचम्मको कुरा होइन। वचनले त हामीलाई भक्तिपूर्ण जीवनको महिमापूर्ण रहस्यको भेद खुलाउँदछ… तर प्रायःजसो इसाई समुदायहरूबीच भने यस केन्द्रीय सत्यता बेवास्ताको धूलोले ढाकिएको छ। कतिपय समुदायहरूमा, सुसमाचार प्रचारको सेवाकार्यमा र हराएकाहरूलाई मुक्ति पाउने उपाय बताइँदा क्रूसलाई सठीक रूपमा जोड दिइएको पाइन्छ… तरैपनि पवित्र जनहरूलाई ख्रीष्टियन जीवन जिउने उपाय बताइँदा भने क्रूसलाई न्यूनीकरण गरिएको पाइन्छ। “ख्रीष्ट तपाईंहरूको लागि मर्नुभयो” भनेर प्रचार गर्नलाई जोशिला यिनै मित्रहरूले… हामी उहाँसँगै मर्‍यौं भन्ने कुरालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ। यस सत्यतालाई पछिल्लो स्थान दिइन्छ। तर, क्रूसमा टाँगिएको जीवनबेगर भक्तिको जीवन सम्भवै छैन। वचन नै रहस्यको प्रकाश हो। साथै वचन क्रूसको वचन हो। बगाललाई साँच्चै खुवाउने हो भने… र भक्तिको जीवनका लागि परमेश्वरको योजनालाई प्रकट गर्ने हो भने, हामीले हाम्रा शिक्षण कार्यमा यी दुई धाराहरूलाई केन्द्रीयस्थानमाराख्‍नैपर्छ… ख्रीष्टसितको सम्बन्धको रहस्यलाई… र क्रूसको केन्द्रीयस्थानको सत्यतालाई। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, हामीले ख्रीष्ट र उहाँ टाँगिनुभएको कुरालाई जोड दिनुपर्छ।
“ख्रीष्टको वचनले तिमीहरूभित्र प्रशस्त गरी वास गरोस्; भजन, स्तुतिगान र आत्मिक गीतद्वारा सारा बुद्धिसित एक-अर्कालाई सिकाओ र सम्झाओ, अनुग्रहसाथ आफ्ना हृदयहरूमा प्रभुका निम्ति गाओ” (कलस्सी ३:१६)।
कलस्सी र एफेसीका यी खण्डहरू समानन्तर खण्डहरू हुन् र तिनका सन्दर्भहरू झण्डै उस्तै छन्। फरक यति मात्र छ: एफेसीले विश्वासीभित्र उसलाई नियन्त्रण गर्न अन्तरबास गर्नुहुने आत्माको शक्तिलाई जोड दिएको छ भने कलस्सीले चाहिँ विश्वासीभित्र उसलाई नियन्त्रण गर्न अन्तरबास गर्ने वचनको शक्तिलाई। यसर्थ, हृदयमा ख्रीष्टको वचन प्रशस्त गरी बास गर्नु र हृदय पवित्र आत्माले भरपूर हुनु, समानन्तर कुराहरू हुन्। यी दुवैले बयान गरेका भलोपूर्ण नियन्त्रण-शक्ति (controlling influence) ले विश्वासीको जीवनमा उस्तै-उस्तै नतीजाल्याउँदछन्: हृदयमा गीत; धन्यवाद; सुखी र सन्तुलित परिवार आदि। एउटा विश्वासी जति बढी समय र जति निरन्तर रूपमा आत्माले भरपूर हुँदछ, उति नै छिटो ऊ परिपक्व बन्दै जानेछ। जति बढी गहिरो र प्रशस्त गरी ख्रीष्टको वचनले हृदयलाई भिजाउँदछ, त्यति नै बढी यसले हाम्रो जीवनलाई नियन्त्रण गर्नेछ अनि त्यही अनुपातमा हामी ख्रीष्टको रूपमा बढ्दै जानेछौं र साँचो, भक्तिपूर्ण जीवन अनुभव गर्नेछौं।
सबै विश्वासीहरू पवित्र आत्मामा उत्तिकै समर्पित हुन चाहन्नन्, त्यसैले सबैको जीवनमा उत्तिकै फल भेटिँदैन: कतिमा ३० गुणा, कतिमा ६०, कतिमा ९० गरी त्यहाँ मात्राको भिन्नता भेटिन्छ। गुणात्मक हिसाबमा पनि त्यहाँ भिन्न-भिन्न श्रेणीहरू भेटिन्छन्: अल्प-घृतांश (पातलो) दूधदेखि लिएर बाक्लो, तरैतरको क्रिम। सबै साँचा विश्वासीहरू ख्रीष्टलाई प्रेम त गर्छन् नै, ख्रीष्टको वचनलाई प्रेम गर्छन् नै। ख्रीष्टको वचनले सबै विश्वासीहरूको हृदयमा कुनै न कुनै मात्रामा बास गरेको त हुन्छ नै। तर यो स्पष्ट छ, वचनलाई प्रेम गर्ने सवालमा, कति विश्वासीहरूको प्रेम अरूको भन्दा बढ्ता गहिरो र खँदिलो हुन्छ… कुनै पनि एउटा समयमा तुलना गर्दा। कोही वचनको सतहमा छप्ल्याङ्ग छुप्लुङ्ग खेल्छन्; अरू भने सीधै गहिरो डुबुल्की मार्छन्। कोही अलिकति स्वाद चाख्छन्; अरू भने त्यसको निम्ति भोकाउँछन् र खर्लप्पै निल्छन्। ख्रीष्टको वचन हामीभित्र प्रशस्त गरी बास गरोस् भन्ने आज्ञाको तात्पर्य अलिकति-अलिकति चाखोस्, कहिलेकाहिँ-कहिलेकाहिँ चाखोस् भन्ने होइन, त्योभन्दा बढ्ता हो। प्रशस्त गरी(richly) को माने ज्यादा, धेरै, प्रचुर; मानौं भल बग्ने गरी परमेश्वरको वचनको तृष्णा हुनु र परमेश्वरको वचनलाई खानु। कहिलेकहिँ, अलिअलि चाख्‍नाले यहाँ उल्लेखित आशा गरिएका फलहरू फलाउन सक्नेछैन।
यूहन्ना १७:१६-१९ — हामी वचनले पवित्र पारिँदछौं।
यूहन्ना १५:३ — हामी वचनले शुद्ध पारिँदछौं।
प्रेरित २०:३२ — हामी वचनद्वारा निर्माण गरिन्छौं।
एफेसी ५:२६ — ख्रीष्टले मण्डलीलाई वचनद्वारा पवित्र पार्नहुन्छ र धुनुहुन्छ।
२ तिमोथी ३:१६-१७ — परमेश्वको जन सिद्ध बनाइयोस् भनेर वचन दिइएको हो।
१ पत्रुस २:२ — हामी वचनद्वारा बढ्दछौं।
२ कोरिन्थी ३:१८ — हामी वचनद्वारा बदली गराइन्छौं।
ख्रीष्टको वचन हामीभित्र प्रशस्त गरी बास गर्नलाई समय लाग्छ। बाइबलको कुनै पदलाई कण्ठ गर्न दुई-चार मीनेट मात्र लाग्ला। त्यसको सत्यता हृदयभित्र राम्ररी स्थापित हुन र हृदयको अभिन्न अङ्ग बन्न, भित्रसम्म घुस्न, गहिरो र बलियो गरी जरा बसालिन र हृदयमा प्रशस्त गरीबास गर्न समय लाग्छ। तर त्यसो भइसकेपछि त्यसले हामीलाई परिवर्तन गराउनेछ। वचनको सुर र धुनअनुरूप हामी ईश्वरीय विचारअनुसार सोच्न थाल्नेछौं र हाम्रो हृदयमा एउटा नयाँ गीतहुनेछ र हामी त्यसैको लय-लयमा हिँड्न थाल्नेछौं। ख्रीष्टको वचन प्रशस्त गरी बास गरेको हृदय सन्तुष्ट हन्छ, भिजेको र भरिएको हुन्छ र अरू पाउन त्यो मुहानमा धाइरहेनछ। उसले अन्य ठाउँमा गई आफ्नो तृष्णा मेट्न खोज्ने सम्भावना उसमा कमै छ। अन्तरबास गरिरहेको वचनको मीठास र प्रशस्तताले उसभित्र त्यसको निम्ति अरु तृष्णाको सृजना गर्दछ। ख्रीष्ट र ख्रीष्टको वचन हाम्रा हृदयहरूमा स्थायी बसोबास गर्न थालेपछिको हामीसँगको प्रशस्त जीवनले जस्तै अन्य कुनै पनि कुराले हामीलाई सन्तुष्टता दिन सक्दैन।
नढाकिएको चेहरा लिएर मोशा पर्वतमाथि परमप्रभुका सामु खडा भए (प्रस्थान ३४:२९)। परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेको कारणले उनको चेहरा उज्जवल बन्यो। परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्दाहुँदि त्यसले मोशामाथि ठूलो काम गर्‍यो। तर अरू मानिसहरू भने परमेश्वरको उपस्थितिमा आउन सकेनन्। उनीहरू त्यसो गर्न डराए। मोशाको चेहरा चम्किरहँदा उनीहरू उनको सामु आउन समेत डराए (प्रस्थान ३४:३०)। मोशाले त्यस महिमाको अलिकति स्वाद चाख्‍न पाए जुन महिमा पछिबाट नयाँ करारको रगतद्वारा परमेश्वरसित सम्बन्धमा गाँसिने प्रत्येकव्यक्तिले नै अनुभव गर्ने पाउने कुरा थियो।
२ कोरिन्थी ३:१८ मा आज हामीले प्रभुको महिमालाई नढाकिएको चेहराले हेर्न पाउनु हाम्रो अहोभाग्य हो भन्ने कुरालाई प्रकट गरिएको छ। ख्रीष्टको रगतले गर्दा हामी परमेश्वरकहाँ महापवित्रस्थानभित्र प्रवेश गर्न सक्छौं — त्यस भित्री पवित्रस्थानमा जहाँ हामी ख्रीष्टसित सङ्गति गर्न सक्छौं (हिब्रू १०:१८-२२)। हामी यस्तो प्रकारले परमेश्वरको नजिकमा जानसक्छौं जुनचाहिँ पुरानो करारको पवित्र जनका लागि असोचनीय कुरा हुन्थ्यो: अर्थात् पूर्ण रूपमा शुद्ध पारिएको विवेकको साहस वा निर्धक्कताका साथ। उक्त पवित्र स्थानभित्र पस्न हामीलाई दिइएको छ… परमेश्वरकै उपस्थितिमा पस्न र उहाँको महिमालाई हेर्न।
हामी उहाँको महिमा “ऐनामा जस्तै” हेर्दछौं। यस ऐनाले परमेश्वरको वचनलाई जनाउँदछ। याकूबले पनि परमेश्वरको वचनलाई ऐनासित तुलना गरेका छन् (याकूब १:२२-२३)। परमेश्वरको वचनले ऐनाले जस्तै दुरुस्त प्रतिबिम्बन गर्न सक्दछ। हामीले परमेश्वरको महिमालाई ऐनामा जस्तै स्पष्टै प्रतिबिम्बित भएको देख्‍न सक्छौं। जसरी मोशा पर्वतमाथि चढेर परमेश्वरलाई देख्‍न सके… उहाँको आवाज सुन्न सके… उहाँको सन्देशलाई ध्यान दिन सके… उहाँको व्यक्तित्वको आभास गर्दै र उहाँको महिमामा अचम्भित् हुँदै, डराउँदै र काम्दै खडा हुन सके, त्यसरी नै हामी पनि परमेश्वरको वचन पढ्दै र स्वर्गको भित्री पवित्रस्थानमा जीवित वचनसित सङ्गति गर्दै त्यस्तै अनुभव गर्न सक्छौं।
परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेको हुनाले मोशा बदलिए। उनको चेहरा उज्यालो भयो। यो व्यवस्था पालनको नतीजा थिएन। यो त मोशाले परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर उहाँको महिमालाई हेर्ने कामको नतीजा थियो। त्यसैले उनी बदलिए। सारा महिमाका परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर प्रभावित नहुनु असम्भव कुरा हो। जिउँदो वचनको पन्नाहरूमा परमप्रभुको महिमालाई हेर्दाहुँदि हामीलाई बदली गर्ने परमेश्वरको वचनको प्रभावशाली कार्यको चित्रणस्वरूप उक्त घटनालाई पावलले यहाँ उल्लेख गरेका हुन्। जब हामी हेर्छौं, हामी “बदलिँदै जान्छौं”। २ कोरिन्थी ३:१८ मा “बदलिँदै जान्छौं” भनेर अनुवाद गरिएको शब्द रोमी १२:२ मा वचनमा विश्वासीको मन नयाँ हुँदै जाँदा वचनले ल्याउने बदलीको कार्यको बयान गर्नलाई प्रयोग गरिएको छ। २ कोरिन्थी ३:१८ ले विश्वासीहरू “त्यही रूपमा” बदलिँदै जाने कुराको बयान गरेको छ, अर्थात् ख्रीष्टको रूपमा… उहाँका नैतिक सद्‍गुणहरूमा… उहाँको वचनको ऐनामा प्रतिबिम्बित परमेश्वरको महिमाकै रूपमा। पर्वतमाथि येशूको रूप परिवर्तनको घटना (मत्ती १७:२) लाई यही शब्दले बयान गरेको छ। आफू, भित्रपट्टि जे हुनुहुन्थ्यो, त्यो (ईश्वरीय ज्योति) निस्केर बाहिरपट्टि चम्किन थाल्यो। त्यस्तै गरी हामीमा पनि: भित्रपट्टि हामी जे छौं, त्यो ( हामीभित्र हुनुहुने ख्रीष्ट) हामीमा वचनको बदली गर्ने सामर्थ्यको कार्यको फलस्वरूप बाहिरपट्टि ज्योतिर्मय हुनेछ।
यो बदली हुने कार्य विस्तारै हुँदै जाने प्रक्रिया हो: एक महिमादेखि अर्को महिमामा। हामी बचाइन्छौं, धर्मी ठहराइन्छौं, नयाँ गरी जन्माइन्छौं, मिलाप गराइन्छौं, छुटकारा गराइन्छौं — सबै समयको एकै घडीमा, तुरुन्तै। तर पवित्रीकरण (sanctification) को र परिपक्वताको वृद्धि (growth) को प्रक्रियालाई जीवनभरको समय लाग्छ। हामी क्रमिक रूपमा ख्रीष्टको रूपमा बदली गराइन्छौं, महिमाको एक चरणदेखि अर्को चरण हुँदै। विश्वासीले जब-जब परमेश्वरको वचनमा समय बिताउने काम, ख्रीष्टको मनन गर्ने काम, उहाँसित सङ्गति गर्ने काम, उहाँमा आफूलाई सुम्पिने काम, उहाँको महिमालाई हेर्ने काम गरिरहन्छ, तब-तब उक्त बदली हुने कार्य अघि बढ्दै जान्छ। त्यहाँ, वचनमा, हामी ख्रीष्टको महिमालाई हेर्दछौं। तर स्मरण रहोस्, हामी यो शिक्षाको महिमा वा त्यो शिक्षाको महिमालाई हेर्नलाई त्यहाँ जाने गर्दैनौं। हामी प्रभु येशूको महिमालाई हेर्दछौं। ख्रीष्टियन विश्वास (Christianity) एकजना व्यक्तिसितको सम्बन्ध हो… एउटा पुस्तक मात्र होइन। त्यो सम्बन्ध उहाँको उपस्थितिमा आउने काम र त्यहाँ रहिरहनेकामद्वारा गहिरो रूपमा विकास हुँदछ। यो एकजना व्यक्तिसितको प्रेमको सम्बन्ध हो र यो परमेश्वरको वचनद्वाराको सम्बन्ध हो।
अनि यो त हाम्रो लागि कस्तो अचम्मको आशिष हो! प्रस्थानको पुस्तकमा उल्लेखित घटनामा केवल मोशा मात्र लाभान्वित भए। तर यहाँ नोट गरियोस्: “हामी सबैजना” (२ कोरिन्थी ३:१८)। हामी ख्रीष्टियनहरू सबैजना नै उहाँको वचनमा एउटा विशेष किसिमले प्रभुको महिमालाई हेर्न र परमेश्वरकै उपस्थितिमा रहेर लाभान्वित बन्न सक्छौं… स्वर्गीय महापवित्रस्थानभित्र रहेर। महापवित्रस्थानभित्र जान हामी सबैलाई बाटो खुला गरिएको छ। परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नलाई मोशा आफूले चाहेको समयमा पर्वतमाथि चढेर जान सक्दैनथे, तर हामी भने उहाँको वचनद्वारा परमेश्वरको उपस्थितिमा सबै समयहरूमा प्रवेश गर्न सक्छौं। त्यसो गर्नाले हाम्रो जीवनहरू बदली हुन्छन्। भक्तिको जीवन ख्रीष्टको रूपमा बदली भएको जीवन हो। त्यो जीवनले नै अन्तरबास गर्नुहुने ख्रीष्टको झिवणलाई प्रकट गर्नेछ। हाम्रा जीवनले तब शरीर वा पाप स्वभावको दुर्गन्ध काढ्नेछैन… तर ख्रीष्टको मीठो बासनाको सुगन्ध फैलाउनेछ… तपाईंभित्र अन्तरबास गर्नुहुने ख्रीष्टको जीवन। अनि त्यही जीवनले नै जसले परमेश्वर पितालाई खुशी पार्दछ। उहाँ आफ्नो पुत्रको प्रत्येक अभिव्यक्तिमा प्रसन्न बन्नुहुन्छ।
“किनकि परमेश्वरको वचन जिउँदो, प्रभावशाली र कुनै दुईधारे तरवारभन्दा पनि लाग्ने हुन्छ; जसले प्राण र आत्मालाई, जोर्नी-जोर्नी र मासीलाई पनि अलग-अलग पार्ने गरी छेंड्छ, र हृदयका विचार र मनसायहरू खुट्ट्याउने हुन्छ” (हिब्रू ४:१२)।
हृदयमा प्रशस्त गरी वास गरिरहेको र विचार र हृदयलाई बदली गरिरहेको वचनले विश्वासीलाई प्राणीक कुरा (पाप स्वभावले राज्य गर्ने प्राकृतिक, सांसारिक (earthly) क्षेत्र) र आत्मिककुराका बीच भिन्नता छुट्ट्याउने क्षमता प्रदान गर्दछ। शरीर (पाप-स्वभाव) अत्यन्तै धूर्त छ। कसरी-कसरी त्यसले प्राकृतिक कुरालाई आत्मिक कुराको रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्दछ। हृदयभित्र वचन प्रशस्त गरी बास गरिरहेको छैन भने, विश्वासीले समेत प्राकृतिक कुराबाट आत्मिक कुरालाई छुट्ट्याउन सक्नेछैन।
प्राणीक कुरा र आत्मिक कुराका बीचमा भिन्नता देख्‍न कठीनाइ हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा सार्डिसमा भएको मण्डली (प्रकाश ३:१) एउटा राम्रो उदाहरण हो। सार्डिसमा भएको मण्डली जीवित छ भन्ने “नाम” (मर्यादा, reputation) चाहिँ थियो। त्यहाँ थुप्रै कार्यक्रमहरू र क्रियाकलापहरू थिए र ती सबै नै उनीहरूको बीचमा ख्रीष्टको जीवनको अभिव्यक्ति हुन् भन्ने कुराको मान्यता सफलरूपमा प्राप्‍त भइसककेको थियो। उक्त मण्डलीका धेरैजना सदस्यहरू आफ्ना जीवन जिइरहेका थिए र परमेश्वरको सेवा गरिरहेका थिए र अरू सबै मण्डलीहरूले यो मानिलिएका थिए कि उनीहरूले देखिरहेका क्रियाकलाप आत्माले भरपूर भएका स्वस्थ पवित्र जनहरूले भक्तिको जीवन जिएर अन्तरबास गर्नुहुने ख्रीष्टको जीवनलाई प्रकट गरिरहेका कुराको अभिव्यक्ति हुन्।
तर त्यहाँ खास कस्तो किसिमको कुरा चलिरहेको थियो भन्ने कुरा परमेश्वरले देख्‍न सक्नुहुन्थ्यो। मानिसले देख्‍न नसक्ने कुरा उहाँले देख्‍नुभयो: उनीहरूको धार्मिक क्रियाकलापको वास्तविक स्रोत: अर्थात्, शरीर (पाप स्वभाव)। यसकारण उहाँको निष्कर्ष यो थियो, उनीहरू “मरेका” छन्। परमेश्वरले देख्‍नुभएको कुरा ख्रीष्टको जीवनको अभिव्यक्ति थिएन — तर पतित, भ्रष्ट शरीरको अभिव्यक्ति… छलपूर्ण, धूर्त, आत्मिकताको भेषमा शरीर, जोश र समर्पणसहित।
यो कस्तो दृश्य! यहाँ हामी देख्छौं एउटा ठूलो, सफल, बढ्दै गरेको, व्यस्त इभान्जेलिकल मण्डली, परमेश्वरका निम्ति क्रियाकलाप र कार्यक्रमको थुप्रोले व्यस्त, हुन सक्छ उनीहरूको सफलताको देखासिकी गर्नलाई अरू मण्डलीहरूलाई उनीहरूले सेमिनारहरू प्रदान गरिरहेका छन्, र अरू मण्डलीहरूका आँखामा यो मण्डली एउटा जीवनले भरिएको मण्डलीको नामले एकदम चर्चित छ। तरैपनि परमेश्वरको मूल्याङ्कन भने मानवीय विचार र मानवीय दृष्टिकोणको ठीक विपरति छ। परमेश्वरले त यो मरेको छ भन्नुभयो। स्वर्गबाट उहाँले सार्डिसको शहरमा रहेको मण्डलीलाई हेर्नुहुँदा उहाँले त्यहाँ आफ्नो प्रिय पुत्रको जीवनदेख्‍नुभएन। पुत्रबिना भक्तिको जीवन सम्भव छैन। उहाँबिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं। तसर्थ, उहाँको नाममा सम्पन्न सबै क्रियाकलापहरू केवल काठ, घाँस, पराल मात्र थिए… उहाँको दृष्टिमा कुनै मूल्य नभएको कुरा। उनीहरूका ती सबै क्रियाकलाप देखेर परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्नथ्यो… मानिसका सामु उनीहरूले पाएको मान-इज्जत उहाँको लागि के-के न जस्तो थिएन। वास्तविक कुरा, उनीहरूको क्रियाकलापको स्रोत धार्मिक शरीर (religious flesh) थियो: र शरीर (पाप-स्वभाव) लाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ, त्यसले जेसुकै गरोस्, त्यो जस्तोसुकै देखा परोस् वा मानिसका सामु जतिसुकै आदर गरियोस्।
उक्त मण्डली ख्रीष्टियन जीवनको एउटा एकदमै आधारभूत तथ्यकै विषयमा अनजान थियो: भक्तिपूर्ण ख्रीष्टियन जीवन विश्वासीभित्र हुनुहुने ख्रीष्टको जीवनको प्रकट हुवाइ हो। दुःखको कुरा, त्यहाँ जीवनै थिएन, र (झन् ठूलो समस्या) उनीहरू सो कुरा जान्दैनथे। परमेश्वर र उहाँको वचनको अज्ञानतामा उनीहरूले मानवीय क्रियाकलाप, सेवा र जोशलाई जीवन भन्ठाने। “मबाट अलग रहेर तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ” भन्ने येशूको भनाइ नै नजानेको जस्तै गरी उनीहरू कामकुरा गर्दै थिए। सार्डिसको मण्डलीको स्थापना हुनुभन्दा धेरै अघि नै येशूले उक्त कुरा भन्नुभए तापनि उनीहरूलाई त्यो कुरा थाहै थिएन जस्तो देखिन्छ।
सार्डिसमा सामूहिक तहमा देखिएको अज्ञानता व्यक्तिगत तहमा अनगिन्ती पटक विश्वासीहरूकमा पाइन्छ। भक्तिको जीवन जिउनलाई परमेश्वरको योजनाको अज्ञानताको फलस्वरूप सधैं यस्तो नतीजा उत्पन्न हुन्छ: विश्वासीहरू परमेश्वरको मापदण्ड अनुसार जिउन र परमेश्वरलाई मन पर्ने बलिदान चढाउनलाई सकेसम्म प्रयास गर्छन्… यो महसुसै नगरिकन कि हाम्रो शरीरमा कुनै असल कुराले बास गर्दैन र हाम्रो पुरानो मान्छेले परमेश्वरलाई चढाउन सक्ने कुनै पनि कुरा उहाँलाई प्रसन्नलाग्दो हुनेछैन। धेरै, धेरै नै पटक, शरीरको क्रियाकलापलाई भक्तिको जीवनको रूपमा मान्यता दिइन्छ। शरीरले परमेश्वरलाई चढाउने जुनसुकै कुरा — मानिसका सामु त्यो जतिसुकै उच्च मानप्राप्‍त किन नहोस् — उक्त शारीरिक बलिदान जतिसुकै सुटेड-बुटेड किन नहोस् — त्यसको कुनै पनि अंश परमेश्वलाई ग्रहणयोग्य हुन सक्दैन।
यसकारण, यी सबैलाई वारपार काटेर छुट्ट्याउन सक्न हामीलाई परमेश्वरको वचन चाहिन्छ, कुन कुरा नक्कली, देखावटी, शारीरिक हो भनेर प्रकट गरिदिन, ता कि हामीद्वारा ख्रीष्टको जीवन — साँचो जीवन — प्रकट होओस्। आफ्ना हृदयहरूमा परमेश्वरको वचन प्रशस्त गरी बास गरिरहेकाहरूले आफ्ना ज्ञानेन्द्रियहरू अभ्यस्त भइरहेको पाउनेछन्। उनीहरूले सडेको लाश र ख्रीष्टको मीठो बासनाको बीचको गन्धको भिन्नता छुट्ट्याउन सक्छन्। पिताले शरीरको दुर्गन्धलाई घृणा गर्नुहुन्छ; तर उहाँ आफ्नो पुत्रमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। बाह्य रूप जतिसुकै मिल्दोजुल्दो देखिए तापनि, उहाँको प्रिय पुत्रको जीवनभन्दा कमसल कुनै पनि कुरा पितालाई कहिल्यै पनि चित्त बुझ्न सक्दैन।
भक्तिको जीवन भनेको ख्रीष्ट तपाईंभित्र जिउनु हो (“ख्रीष्ट तिमीहरूभित्र” नै भक्तिको जीवन हो)। क्रूसको वचनले हामीलाई सिकाउँछ, शरीर (पाप-स्वभाव) सित व्यवहार गर्ने परमेश्वरको माध्यम के हो। ख्रीष्टको रहस्यको वचनले हामीलाई हामीभित्र आफ्नो पुत्रलाई प्रकट गर्ने परमेश्वरको योजनाको शिक्षा दिन्छ। हाम्रो हृदयमा प्रशस्त गरी बास गर्ने ख्रीष्टको वचनले हाम्रो विचार, हृदय र हिँडाइमाथि नियन्त्रणकारी प्रभाव जमाउँछ। उहाँको वचनको ऐनामा प्रभुको महिमालाई हेर्ने काम हामीमा बदली ल्याउने पवित्र आत्माको कार्यको लागि अनिवार्य छ। दुईधारे तरवारको रूपमा वचनले हामीलाई प्राणीक कुरा र आत्मिक कुराको बीचमा भिन्नता देख्‍न सक्ने बनाउन सक्छ। शुरू देखि अन्तसम्म नै भक्तिको जीवनको लागि परमेश्वरको वचन चाहिन्छ नै।